डा. केसी तत्काल अनशन नबस्ने (विज्ञप्तिको पूर्णपाठ)
१८ पुष २०७५, बुधबार १७:१६
काठमाडौं, १८ पुस । १६ औं अनशन बस्न इलाम पुगेका डा. गोविन्द केसीले सात दिनका लागि अनसन स्थगित गरेका छन् । उनले बुधबार दिउँसाे विज्ञप्ति जारी गरी पुस २५ गतेसम्मका लागि अनसन स्थगित गरेको जनाएका हुन् ।
डा. केसीले आफूसँग भएका सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक जारी गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । उनले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई एक हप्ताको समय दिएको बताउँदै सत्याग्रह स्थगित गरेका हुन् ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिमा बुधबार विधेयकमाथि छलफल सुरू भएको थियो । तर, सहमति जुट्न सकेन । नेपाली काँग्रेसका सांसदले विधेयक तोडमोड गर्न नदिने अडान राखेपछि विधेयकमाथि थप छलफल हुन नसकेको हो ।